I-Apple ikhupha i-iOS kunye ne-iPadOS 15.1 RC yaBaphuhlisi | IPhone iindaba
I-Apple ikhupha i-iOS kunye ne-iPadOS 15.1 RC yaBaphuhlisi
UKarim Hmeidan | 18/10/2021 21:12 | iOS 15
U-Apple usishiye imilomo yethu ivulekile emva kokuboniswa kweMacBook Pro entsha kunye neM1 Pro kunye neM1 Max. Iikhompyuter ezintsha ezifika ukuguqula umhlaba wekhompyuter kwakhona ... I-M1 sele imangalisiwe, uya kubona iM1 Pro neMax. Kodwa ayizizo zonke izinto eziza kuba yiMac.I-Apple ikwafuna ukubonisa ii-AirPods ezintsha kunye ne-MiniPods Mini, kwaye ngayo yonke le nto abaphuhlisi baphinde basebenza ukusukela eCupertino Ndisandula ukukhupha iinguqulelo ze-RC ze-iOS kunye ne-iPadOS 15.1. Qhubeka ufunda ukuba sikunika zonke iinkcukacha zolu hlobo lutsha.
Njengoko sihlala sikuxelela, ezi nguqulelo zezabaphuhlisiZiinguqulelo ze-beta ezithi, nangona zifikelela kuguqulelo loMgqatswa woKhululwa, zisese-betas. Kwaye ukukhutshwa kwezi nguqulelo kunentsingiselo: kungekudala siza kuba nakho ukubona iinguqulelo ezizinzileyo kwizixhobo zethu. IOS kunye ne-iPadOS 15.1 izisa ukuphuculwa kwezixhobo zethu apho sifumana ifayile ye Yabelana ngokuDlala ukubuya, ukusebenza okutsha okuya kusivumela biza abahlobo bethu kwaye unxibelelane nabo ngokubukela iimuvi okanye ukumamela umculo kunye. NgeSabeloPlay, uluhlu lwadlalwayo ekwabelwana ngalo kunye nokudityaniswa kweenkqubo zikamabonwakude zibuyile ukuze bonke abathathi-nxaxheba bakwazi ukuzibona ngaxeshanye.
Ukongeza, kubasebenzisi be I-iPhone 13 Pro, i-iOS 15.1 isizisela inkxaso yokurekhodwa kwevidiyo kwiProRes (ilungele ukuhlela kwi-M1 Max yakho entsha), inqunyelwe kwi-30fps kwi-1080p kwizixhobo ezine "kuphela" i-128GB yokugcina (abanye banokurekhoda kwi-4K); kunye ne ukukhubaza i-Auto Macro ukusondela kakhulu kwizinto. Iindaba eziza kunye nokulungiswa kwe-bug okuza kwenza i-iOS 15 izinze ngakumbi. Inguqulelo esiza kuyibona kuguqulelo oluzinzileyo kwiveki ezayo ukuze uhlale ubukele njengoko siza kukwazisa kwakamsinya xa sineendaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 15 » I-Apple ikhupha i-iOS kunye ne-iPadOS 15.1 RC yaBaphuhlisi
I-AirPod yesizukulwana sesi-3 ifuna i-iOS 13
Ukwamkelwa kwelizwi kwi-HomePod kuya kufika eSpain naseMexico kungekudala